Zakarie Abdi – Page 199 – Filimside.net
Bollywood King Khan (Shah Rukh Khan) oo abaal marinta Crystal Award 2017 lagu gudoonsiin doono madasha dhaqaalaha aduunka
Bollywood King Khan Aka Shah Rukh Khan ayaa lagu sharfay inuu ka qayb galo madasha dhaqaalaha aduunka looga dooda (World Economic Forum). Madasha dhaqaalaha aduunka looga doodo waxaa sanadkaan lagu qaban doonaa magaalada Davos ee dalka […]
Sonam Kapoor oo lagu qayaamay joodari ay soo iibsatay mana uusan yeelanin tayadii ay ka fileesay!
Atirishada caanka ah Sonam Kapoor oo uu aabo u yahay ruug cadaa Anil Kapoor ayaa baraha bulshada qabsatay ayadoo careesay. Xidigtaan oo aan la gambanin wax walbo oo noloshooda ka hor imaado ayaa sheegtay in […]
Director Ali Abbas Zafar oo doonayo inuu filim shactiro ah SRK iyo Salman u wada dhiibo
Director Ali Abbas Zafar guushiisa cirka ayay mareysaa madaama labadiisa filim ugu dambeeyeen Sultan (2016) iyo Tiger Zinda Hai (2017) ay 300 Crore darajo ahaan gaareen sidoo kalena waa labo filim oo Big Blockbusters ah. […]
Director Vikram Bhatt wuxuu la yimid filimka cabsida badan 1921 markaana Zareen Khan ayuu laso shirtagay s ay filimkiisa u gado, madaama gabadhaan dhawaanahan u weecatay sameynta aflaanta qayaanada iyo dareenka isku jiro sameyntooda. Jilaayaasha: Karan Kundra, […]
Katrina Kaif walaasheed Isabelle filimkeeda kowaad Sooraj Pancholi ayay la sameyn doontaa
Atirishada Katrina Kaif oo magaceeda caalamka ku faafay waxay soo caan bixin doontaa walaasheed ka yar Isabelle Kaif oo xiiso u qabto inay Bollywood-ka kusoo biirto. Isabelle Kaif filimkeeda kowaad waxay la sameyn doonaa ruug cadaa […]
Sheekada filimka Thaanaa Serndha Koottam: Suriya si wacan ayuu uga baxsaday dib u sameynta filimka Special 26
Tamil Superstar Suriya maanta waxaa tiyaatarada loo saaray filimka Thaanaa Serndha Koottam oo ah mid sheeko ahaan laga soo min guuriyay filimka Bollywood-ka ah Special 26 ee Superstar Akshay Kumar sameeyay sanadii 2013. Director: Vignesh Shivn Jilaayaasha: Suriya, […]
Shabakada Boxoffice India: Judwaa 2 wuxuu TV-yada ka noqday Blockbuster aan caadi ahayn
Varun Dhawan hada wuxuu noqday sida atoore 25-sano fanka Hindiya kusoo jiray marka loo fiiriyo filimkiisa ugu dambeeyay Judwaa 2 inuu TV-yada la noqday Blockbuster aan caadi ahayn oo taariikh reebay (Extraordinary Blockbuster). Waxaan horey […]
Disaster Friday: Jimco bur burkeeda wadato Kaalakandi Mukkabaaz iyo 1921 wax daawado ayaa la waayay!
Jimco bur bur ku dheehan ayay Bollywood-ka ku bilaawdeen 2018 madaama sedexdii filim ee la hadal haayay Kaalakandi Mukkabaaz iyo 1921 gabi ahaanba la waayay maanta wax usoo daawasho tagaan! Kaalakandi, Mukkabaaz iyo 1921 waxay ka […]
Tamil Superstar Vikram wuxuu la yimid filim lagu magacaabo Sketch oo maanta tiyaatarada la saaray waana filim Action ah oo ay la jileyso atirishada Tamannah Bhatia. Jilayaaasha: Vikram, Tamannaah Bhatia, Soori, Harish Peradi, Radha Ravi and Ravi Kishan […]
« 1 … 198 199 200 … 343 »